Carla Montero. Ajụjụ ọnụ onye edemede El medallón de fuego | Akwụkwọ dị ugbu a
Carla Montero. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ nke The Fire Medallion
Foto: Carla Montero, profaịlụ Twitter.
Carla montero Ọ gụrụ akwụkwọ iwu na njikwa azụmaahịa, mana afọ ole na ole gara aga etinyerela akwụkwọ. O meriri Circle of Novel Readers Award con Nwanyị nọ n'ihe egwu, ihe ịga nke ọma mbụ ya. Ha gara n'ihu The emerald table, The gold akpụkpọ, The oyi na ihu gị ma ọ bụ Ogige ụmụ nwanyị Verelli. Ihe omuma ohuru ya bu Medallion ọkụ ma ọ pụtara na Ọktoba gara aga. Daalụ nke ukwuu oge gị na obiọma gị iji nye m ajụjụ ọnụ a nke ọ na-ekwu maka ya na isiokwu ndị ọzọ.
Carla Montero - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ NDỊ NDỊ DỊ N'ỤLỌ NCHE: Aha akwụkwọ akụkọ gị bụ Medallion ọkụ. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
CARLA MONTERO: Medallion ọkụ were ụfọdụ agwa site na akwụkwọ akụkọ m gara aga, Tebụl emerald, iji tinye ha na a ọhụụ ọhụrụ na-achọ relic nke na-enye akwụkwọ aha ya. Ana García-Brest onye na-eto eto nka, na Martin Lohse, onye na-achụ nta akụ dị omimi, bụ ndị na-akpa nkata nkata a na-ewebata ha Madrid, Berlin, Zurich, Saint Petersburg ma ọ bụ Istanbul n'ọsọ dị ize ndụ iji nweta ọla ahụ.
N'oge ọchụchọ ha, ha ga-ejikọta na a akụkọ ihe mere eme nke gara aga na-eme na Berlin, na Mee 1945, obere oge ka ndị Soviet weghara obodo ahụ na Agha Ụwa nke Abụọ biri na Europe. N'ọnọdụ a, ọtụtụ mkpụrụedemede na-agbakọta nke nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na nrite: Katya, onye na-agba egbe Russia; Eric, ọkà mmụta sayensị German; Ramiro, nwa akwụkwọ Spanish; ma Peter Hanke, onye bụbu onye nnọchi anya ndị Gestapo.
Echiche nke weghachite agwa de Tebụl emerald Ọ bụ ihe, n'ime afọ iri a kemgbe ebipụtara akwụkwọ akụkọ a, m na-atụ aro na agụ. Nke ahụ, yana isiokwu ndị ọzọ m chọrọ ikwurịta na nke yiri ka ọ dabara nke ọma na ọrụ ahụ, edugawo na ya Ọkụ medallion.
cm: Mba, anaghị m echeta akwụkwọ mbụ m gụrụ. O nwere ike ịbụ ihe ọchị, mgbe m dị obere m hụrụ n'anya ha, nakwa akwụkwọ nke Elena Fortun, Ise, Ndi Hollister… Ma eleghị anya akwụkwọ okenye mbụ m gụrụ bụ Rebecca, na Daphne du maurier, o wee chụpụ m. Ihe mbụ m dere bụ a ihunanya njem, site n'aka, na folios, ịbụ onye na-eto eto.
CM: Enwere m oke Ndị ode akwụkwọ ọkacha mmasị m, enweghị m ike ịhọrọ otu. Jane Austen, ụmụnne nwanyị Bronte, Charles dickens, oscar Wilde, Agata Christie, Hemingway, Scott-Fitzgerald, Ken mpempe akwụkwọ, Rosamunde pilcher, Michael Ndị ahịa, Elena Fortún ... Buf, bụ na m hapụrụ ọtụtụ ...
CM: A Jane eyre na Maazị Rochester.
cm: O nweghi. N’ihi ọnọdụ m dị ka onye otu ezinụlọ buru ibu, ana m ede ebe m nwere ike, otu m nwere ike na mgbe m nwere ike.
CM: Ọ bụrụ na m nwere ike họrọ, m na-ahọrọ oge nke nkịtị na ịnọ naanị, na tebụl m dị n'ihu windo, na tii, nke na-agwụcha oyi, na kandụl ọkụ.
cm: Naanị ụjọ - ma e wezụga ụfọdụ kpochapụ- na sayensị akụkọ ifo.
cm:Withoutmụ nwoke na-enweghị ụmụ nwanyị, na Murakami. Ma dee, Ana m ede ole na ole ajụjụ ọnụ.
CM: m Ekpebiri m ibipụta Circle of Novel Readers Award. Ruo mgbe ahụ, enweghị m ọrụ ibipụta, edere m maka obi ụtọ nke m. Mana ahụrụ m onyinye a mara ọkwa n'oge na-adịbeghị anya yana eziokwu na ọ bụ naanị ndị na-agụ ya mere ntuli aka gbara m ume ka m gosipụta onwe m. Emeri m ya na nke ahụ butere m ebe m nọ taa, afọ iri na abụọ gachara yana akwụkwọ akụkọ isii ebipụtara.
Ugbu a, ịdị adị nke ọtụtụ nhazi akwụkwọ na-ebipụta onwe ya Ọ bụ ihe ngosi dị mma ime mmụba n'ime ụwa mbipụta. Ọ bụkwa eziokwu na enwere asọmpi dị ukwuu na, site na ihe m na-anụ, ọ na-esiri ike ịchọta ọrụ ndị na-ejikọta àgwà na nhazi azụmahịa.
CM: Ọnọdụ ugbu a anaghị emetụta m na ọkwa ọkachamara, n'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-eme ya nke ọma n'ihi na afọ ndị a nke ọrịa na-efe efe. ndị mmadụ enwetaghachila mmasị ịgụ ihe dị ka ihe kacha mkpa ụdị ntụrụndụ. Otu ọ dịla, Echeghị m na ọrịa ọjọọ a na-akpali m. M, n'aka nke m, nwere ezuru ibi ya, Achọghị m ka ọ bụrụ akụkụ nke akụkọ m. Ọbụghịdị isiokwu mara mma maka m dịka onye na-agụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Carla Montero. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ nke The Fire Medallion
Almudena Grandes agaala, ụwa agụmagụ na-eru uju ọpụpụ ya na-atụghị anya ya
Rhymes na akụkọ ifo nke Bécquer